सरकारको आम्दानी १ खर्ब ७२ अर्ब घट्यो, खर्च ७० अर्ब कम
चालू आर्थिक वर्ष (आव)मा बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत आवमा भएको वास्तविक खर्चको तुलनामा करिब २२ प्रतिशत रकम बढाएका थिए ।
२२ प्रतिशत रकम बजेट वृद्धिका क्रममा सबैभन्दा धेरै महत्त्वाकांक्षा राजस्वमा राखिएको थियो भने वैदेशिक ऋण र सहायता पनि त्यसैगरी बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालय स्वयम् कोरोना महामारीका कारण चालू आवमा लक्ष्यअनुसारको आम्दानी र खर्च दुवै नहुने आँकलन गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्य र आम्दानीको दुवै लक्ष्य ३ पटक संशोधन गरिसकेको छ ।
बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राखेको लक्ष्य पनि भेटाउन समस्या देखिएको छ । विशेष गरी पुँजीगत खर्च र राजस्व लक्ष्यमा समस्या पर्ने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । महत्त्वपूर्ण समयमा काम रोकिएका कारण खर्च आम्दानी दुवैमा लक्ष्य पूरा गर्न समस्या देखिएको महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।
पहिलो महिनादेखि नै खर्च र राजस्वमा लागेको ब्रेक चैतपछि भने थप समस्या भयो कोरोना महामारीका कारण । 'हुन त लक्ष्यअनुसार खर्च र आम्दानीमा केही कमी आएको थियो तर कोरोनाका कारणले पछिल्लो समय भने लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो देखियो,' अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री भन्छन् ।
चालू आवको १४ असारसम्मको स्थितिमा सरकारको आम्दानी गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशतले कमी छ । गतवर्ष १४ असारसम्म राजस्व, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण तथा अनुदान गरेर सरकारी खातामा ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । चालू आवकाे १४ असारसम्मको स्थितिमा ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै यस्तो आम्दानी भएकाे छ । जसमा आन्तरिक ऋण गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ खर्ब रुपैयाँ बढी छ ।
राजस्व भने गतवर्षको भन्दा निकै कम छ । गत १४ असारसम्म ७ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकाेमा चालू आवमा ६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्रै राजस्व उठेको छ ।
चालू आवमा सरकारले १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाएकोमा गतवर्ष ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठाइएको थियो । सरकारले आन्तरिक ऋण मात्रै गतवर्षको भन्दा करिब १ खर्ब रुपैयाँ बढी उठाएको छ ।
सरकारले आम्दानी गतवर्षको भन्दा १५ प्रतिशत न्यून हुँदा खर्च गतवर्षको भन्दा ७ प्रतिशत न्यून छ । गतवर्षको तुलनामा चालू खर्च भने १५ प्रतिशत वृद्धि छ भने पुँजीगत खर्च न्यून भएको छ । गतवर्ष १४ असारसम्ममा सरकारले १० खर्बभन्दा बढी खर्च गरेको थियो । चालू वर्षमा भने ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । खर्च भएको रकममा पुँजीगत खर्चको हिस्सा निकै कम छ । सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि २६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, वास्तविक खर्चको हिस्सामा पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्रै छ ।
हालसम्म खर्च गरिएको ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने सरकारले लिएको ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा ९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
सरकारले चालू आवका लागि चालू खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेकोमा ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको ७३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको विकास खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा १ खर्ब ३४ अर्ब अर्थात् विनियोजित बजेटको ३२ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ५६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको अधिकांश रकम असारमा नै खर्च हुने भएकाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने गर्छ ।
विगतका वर्षहरूमा असारमा अन्य खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च अधिक हुने गरेको थियो । आव २०७४/७५ मा पुँजीगत खर्चको भुक्तानी असारमा प्रत्येक दिन औसत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा थियो भने आव २०७५/७६ मा औसत ४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएको थियो । चालू आवकाे असारको आधा महिना बित्दा औसत ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । तर पछिल्लो साता भने १ अर्बभन्दा बढी खर्च भएकाे छ । यद्यि चालू खर्च भने असारमा प्रतिदिन औसत ४ अर्बभन्दा बढी छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, १५ असार २०७७, १०:४८:००